सबैभन्दा उत्कृष्ट सेल्सम्यान कसरी बन्ने ? | NepalDut
भनिन्छ, बिक्री (सेल) गर्नु पनि एक प्रकारको कला नै हो । ‘बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भनेजस्तै यो थोरै हठी र थोरै धेर्यमा रहेर खेलिने ‘खेल’ पनि हो ।
मानिसहरु आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नका लागि ‘म तालु खुइलिएको मानिस (टक्लु)लाई पनि कांगियो बेच्न सक्छु’ भन्छन् । यो पनि एक आत्मविश्वास र उत्साह हो ।
आफूमा भएको कलालाई आत्मविश्वास र उत्साहका साथ प्रदर्शन गर्न सकियो भने तपाईंले होली सकिएको केही दिन पछि पनि आफ्ना ग्राहकहरुलाई रंग बेच्न सक्नुहुन्छ ।
विश्वमा चलेका जागिरमध्ये ‘सेल्सम्यान’को जागिर पनि एक उत्साहपूर्ण र आनन्ददायी मानिन्छ । तर, यसका लागि तपाईंमा केही उत्साह र धेरै मात्रामा धेर्ययता चाहिन्छ । आज हामी तपाईंलाई कसरी उत्कृष्ट सेल्सम्यान बन्ने भनेर केही टिप्स दिँदै छौं,
ग्राहकलाई महत्व दिनुहोस्
तपाईंले बिक्री गर्ने सामान कसैले किन किन्ने ? यसको उत्तर तपाईंले ग्राहकलाई स्पष्टसँग दिनुपर्छ । तपाईंले ग्राहकलाई यो विश्वास दिलाउनुपर्छ कि, जो सामान तपाईं बेचिरहनुभएको छ यसको उसलाई साँच्चिकै आवश्यकता छ ।
यस्तो अवस्था भनेको तपाईंले ग्राहकलाई धेरै नै महत्व दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा ग्राहकको व्यक्तिगत रुचीको विषयलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै व्यक्ति धेरै बोल्ने र धेरै बोलेको पनि सुन्ने खालका हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंले थोरै शब्द मात्रै बोलेर ग्राहकको मन जित्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
ग्राहकप्रति सहानुभूति राख्नुहोस्
कुनै सामान बिक्री गर्दा यो जान्ने कोशिष गर्नुहोस् कि तपाईंका ग्राहकलाई वास्तमका कुन सामान चाहिएको छ, र किन चाहिएको छ ? यसका लागि तपाईंले आफ्ना ग्राहकलाई धेरै कुरा गर्ने समय दिनुपर्छ । ग्राहकको रुचीलाई चिन्नुहोस् । साथै उसले किन त्यो सामान किन्न चाहिरहेको छ भनेर पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् ।
एक्सपर्ट (विज्ञ) पनि बन्नुहोस्
तपाईं कुनै जुसको पसलमा ‘सेल्सम्यान’ हुनुहुन्छ भने तपाईंको पसलमा भएका सबै जुसबारे तपाईंलाई जानकारी हुनुपर्छ । कुन–कुन देशमा बनेका कुन–कुन कम्पनीका जुस तपाईंको पसलमा छन् भन्ने विषयमा पनि तपाईंलाई जानकारी हुनु जरुरी हुन्छ ।
साथै तपाईंले जुसबारे केही जानकारी पनि हासिल गरेको हुनुपर्छ, जुसमा क्यालोरी कति छ ? कस्ता व्यक्तिलाई कति क्यालोरीको जुस राम्रो हुन्छ ? कति बेला जुस पिउँदा राम्रो हुन्छ ? यी सबै कुरामा तपाईंले ग्राहकलाई विज्ञले जस्तै सुझाव दिनुपर्ने हुन सक्छ ।
अन्य सामान बिक्री गर्दा पनि तपाईंले विज्ञले जस्तै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुनसक्छ । साथै तपाईंले बेचेका सामानहरु कति समयसम्म टिक्छन्, केयर कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि ग्राहकलाई जानकारी दिनुहोस् ।
सामान बेचिसकेपछि पनि ग्राहकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
यदि तपाईं साँच्चिकै एक असाधारण (उत्कृष्ट) सेल्सम्यान बन्न चाहनुहुन्छ भने यसका लागि तपाईंले धेरै पटक हदभन्दा अगाडि बढेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका लागि तपाईंले ग्राहकसँग नियमित सम्पर्क राख्ने गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यदि कुनै ग्राहकले तपाईंबाट दैनिक प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने सामान खरिद गर्छ भने उसलाई पछि पनि त्यसको आवश्यकता पर्न सक्छ । यसका लागि तपाईंले आफ्ना ग्राहकलाई पछि पनि सम्पर्क गरेर उसको आवश्यकता र चाहनाबारे बुझ्न सक्नुहुनेछ ।
यदि तपाईंको कुनै ग्राहकले कुनै पार्टी आयोजना गर्दैछन्, कुनै सुभकार्य आयोजना गर्दैछन् भने उनका लागि सहयोगी पात्र बन्नुहोस्, आवश्यक पर्ने वस्तुहरु खरिदका लागि सल्लाह र सुझाव दिनुहोस् । यसले गर्दा तपाईंले ति ग्राहकबाट अरु धेरै फाइदा पनि लिन सक्नुहुनेछ ।
कामअनुसार लूक मन्टेन गर्नुहोस्
सामान्यतः सेल्सम्यान बन्नका लागि कुनै खास स्टाइलको आवश्यकता त हुँदैन । तर, कारको शोरुममा काम गर्ने सेल्सम्यान र गितार बेच्ने सेल्सम्यानको लूकमा केही भिन्नता त हुन्छ नै । यद्यपि तपाईंले आफू कसरी सभ्य, आकर्षक र मिलनसार देखिन सक्छु भन्ने कुराको भने सधैं ख्याल राख्नुपर्ने हुन सक्छ ।